Xildhibaan Fiqi oo Daaha ka qaaday sir badan oo kujirta Weerarkii xalay ee Hotel SYL. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Xildhibaan Fiqi oo Daaha ka qaaday sir badan oo kujirta Weerarkii xalay ee Hotel SYL.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan Xildhibaanada Mucaaradkaa ee Dowladda Soomaaliya ayaa dood ka keenay sida ay Al shabaab ugu suurta Galashay weerka ay ku qaaday Hotelka SYL oo ku yaala agagaarka Madaxtooyada Soomaaliya
Halkan ka akhriso qoraalka Xildhibaanka:-
Dhul baaxaddiisu ay ka yar tahey 1km oo ciid iyo ciidan intii ugu badneyd lagu gadaamay In Alshabaab soo gaaraan, soo galaan, qabsadaan isla markaana saacado badan ka dhex dagaalamaan ayagoo halkaas ka gaystey falal; argagaxin, dhaawac, dhimasho iyo burburin hantiyeed, ma jirto dayacaad mas’uuliyadeed oo ka weynaan karta dhacdadaas.
Waa wax la wada og-yahey In kooxda argagixisada ah ay dagaal kula jirto dadkeena, diinteena iyo dawladnimadeena laakin waxaa is weydiin mudan haddii amnigii hal kilometer la sugi waayey sidee dal dhan amnigiisa loo sugayaa?
Waxaan u tacsiyaynayaa umadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadkii Soomaaliyeed ee is lahaa goob madaxtooyo xeyndaabkeeda ku jirta oo amni ah ayaad joogtaan ee halkaas lagu xasuuqey, intii ku dhaawactayna bogsiimo Degdeg ah, askartii gurmadka ku timid ee shuhadada aheydna Allaha u aqbalo..
Madaxda Villa Somalia oo ku mashquulsanaa saddexdii sano ee la soo dhaafay sidii ay kursiga u sii joogi lahaayeen oo kaliya, waxey keentay In argagixisadu ay qaraxyadii iyo weeraradii ugu keenaan guryahooda, halkii laga rabey In argagixisada la dabarjaro. Waxaa muhiim ah In tallaabooyin degdeg ah oo dhanka amniga ah la qaado.
Hoteelka SYL magaalada Muqdisho oo kudheggan Taallada SYL kuna dhow aqalka madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Somalia ayaa lakulmay dhowr weerar ooh ore, iyada oo weeraradaas qaarkood ay Hotelka gaarsiiyeen burbur hayeeshee dib ayaa loo dhisay.
Inta badan jidadka ku xiran Jidka Makka Almukarama ayaa xiran iyada oo gaadiidka rayidka laga mamnuucay adegsiga jidadkaas.
Previous articleDAAWO:Xildhibaano Puntland oo bad baaday, Khasaaraha weerarkii SYL oo sii kordhaya & Al-shabaab oo shaacisay xog qarsooneyd
Next articleXildhibaano Gudbiyay Mooshin ka dhan ah mid ka mid ah Wasiirada Xukuumadda Kheyre + Gudoonka oo uyeeray Wasiirkaasi.